“Tani waa Sababta ay ii soo iibsatay Juventus.”.- – Gool FM
“Tani waa Sababta ay ii soo iibsatay Juventus.”.-
(Europe) 13 Maarso 2019. Cristiano Ronaldo ayaa hadlay kaddib saddexleydii uu xalay ka dhaliyay Atletico Madrid taa oo suuro galisay inay kooxdiisa Juventu u soo gudubto wareega sideed dhammaadka Champions League.
“Waa inay noqoto habeen gaar ah wayna ahaydba. Tani waa maskaxda aad u baahan tahay Champions League,” Ronaldo ayaa sidaa yiri ciyaarta kaddib mar uu u waramayay Sky Sport Italia.
“Waxay ahayd habeen gaar ah, ma ahan oo kaliya goolasha aan dhaliyay laakiin sidoo kale kooxda iyo hab dhaqankooda aan innaba caadiga ahayn. Tani waa maskaxda aad u baahan tahay Champions League, wadada saxda ayaana ku raad joognaa.
Juventus waligeed ma sameyn soo laabashadan oo kale taariikhda Champions League, laakiin waxaa suuro galiyay Ronaldo, isagoo ka hadlaya midaa wuxuu yiri:
“Tani waa sababta ay ii keentay Juventus, si aan uga caawiyo habeenadan oo kale. Atletico dhabtii waa koox ay adag tahay in la wajoho, laakiin inagaba waan xooganahay sidoo kale waxaana caddeynay inaan u qalanay inaan u soo gudubno wareega xiga.
“Waa goor hore in laga hadlo Final ka, bal aan talaabo talaabo u gaarno.”.
Muxuu ka yiri Allegri guushii mucjisada ahayd uu xalay ku hogaamiyay Ronaldo kooxda Juventus??